BETEL iyo TARAAXDA ARECA - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
Xilligii xukunka Hung-Vuong III, waxaa ku noolaa mandarin oo la yiraahdo CAO, oo lahayd laba wiil, TAN iyo LANG, oo midba midka kale u eg. Labadooduba way qurux badnaayeen, waxay lahaayeen isla qurux quruxsan, isla sanka oo siman iyo indhaha wax ifaysa. Way isjeclaadeen.
Nasiib darrose, Mandarin iyo xaaskiisa ayaa dhintey, iyo nasiibdarrooyin is daba joog ah ayaa hoos u dhigay agoonta si ay u doonayaan. Si looga fogaado qalqal-galinta ka dhalatay musiibada, ragga dhallinta yar waxay go aansadeen inay adduunka oo dhan shaqo raadiyaan. Arrinta ayaa haysatay inay garaacaan albaabka Qaadiga LUU, waa saaxiib saaxiib dhow la ah waalidkood. The Qaadiga iyaga ka helay soo dhaweyn aad u wanaagsan ee gurigiisii. Oo wuxuu u soo kiciyey sidii carruurtiisa oo kale, maxaa yeelay, isagu ma uu yeelan nin keliya, oo ilaahyadiina waxay isaga siisay gabadha la qurxiyo sida baraf cad, oo ubax wanaagsan sida gu'ga oo kale.
The Qaadiga, iyagoo raba inay adkeeyaan xidhxidhkooda jacayl iyo saaxiibtinimo, waxay jeclaan lahayd inay iyada siiso mid ka mid ah ragga dhallinyarada ah ee guurka. Labaduba labadoodaba si dabiici ah ayey u soo jiiteen muuqaalka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ee gabadha quruxda badan, wayna si qarsoodi ah u jeclaayeen. Si kastaba ha noqotee, waxay lahaayeen qalbi isla siman, mid walbana wuxuu ku adkaystay in kan kale guursado. Weligood heshiis ma geli lahayn, haddii ay xariifadda lahaan lahayd Qaadiga looma adeegsan khiyaano yar si loo ogaado cidda weyn ee walaalkiis ah.
Wuxuu amray in cuntada la siiyo walaalaha, oo ay ku jiraan keliya hal joodar garooc ah. Iyada oo aan laga labalabeyn, LANG ayaa soo qabtay oo u dhiibtay TAN hab xushmad leh. TAN waxay ku qaadatay habka ugu dabiiciga badan adduunka.
The Qaadiga isla markiiba TAN wuxuu u doortay sida aroosadda.
TAN hadda wuxuu ahaa ninka dunida ugu farxadda badan. Wuxuu aad u jeclaa caruusadiisa waxayna ku ballameen jaceyl weligiis ah. Weligiis ma uusan aqoonin 'farxad' wuxuuna waqtigiisa ku qaatay sameynta gabayo jacayl oo uu ku tilmaamo barakadiisa, iyo inuu ku gabyo jacaylkiisa qoto dheer. Wuxuu gebi ahaanba dayacay walaalkiis LANG, oo umuuqday inuu ka baxay fikirkiisa.
Arooska walaalkiis ka dib, LANG ayaa si dhakhso leh u soo afjaray jacaylkiisii ​​qarsoonaa ee uu u hayey gabadhii yareyd, wuuna ku faraxsanaa aqbalkiisa badan maxaa yeelay wuxuu rabay kaliya farxadda iyo farxadda walaalkiis uu jeclaa. Laakiin si tartiib tartiib ah, wuxuu ogaaday in TAN aysan wax dan ah lahayn oo xitaa qabow isaga u tahay.
LANG keligiis ayuu fadhiyey meeshiisa, isagoo dhaqaaq iyo aamusan, isagoo sugaya calaamad saaxiibtinnimo iyo daryeel walaalkiis, laakiin ma aysan imaan.
LANG liita! isaga, tani waxay ahayd rajo xumo. Dhab ahaantii, wuxuu ku dhacay murug duugan: «hoo! walaalkey iga weyn ma jecli mar dambe. Maxay tahay sababta aan halkan u sii joogayo haba yaraatee, maxaa yeelay qofna dan kama lihi? Sida ugu dhaqsaha badan ayaan uga tagaa meeshan, sida ugu wanaagsan.
Cagihiisa ayuu ku dhacay oo cararay, waayo murugtiisu mar dambe ma sii qaadi karto.
Wuxuu soo maray hillocks cagaaran oo badan iyo kaymo caleenta leh ayuu orday, ilaa uu gaadhay bad madow oo buluug ah. Dabayl qabow ayaa dhacday, qorraxduna way dhacday, oo gallerihii ugu dambeeyay ee qorrax soo dhaca ayaa markiiba liqay badda weyn. Wuu eegay oo wax fiirinayay iftiinka xaggiisa, laakiin wax doonni ah lama arag. Oo habeenkiina wuu yimid, oo wuxuu u madoobaaday inuusan waxba arkin hareerahiisa. Wuxuu gabi ahaanba daalay, gaajaysan yahay oo oomman yahay madaxiisuna wuxuu u kululaaday sidii dab oo kale. Wuxuu fadhiistay cawska wuuna ooyay oo ooyay ilaa uu dhintay oo loo rogay dhagax cad oo qurux badan.
Markuu TAN ogaaday in LANG uu guriga ka xaday, aad ayuu uga xumaaday ugana xishooday isxilqaannimadiisa.
Isagoo ka qoomamooday kana walwalsanaa, ayuu u baxay inuu raadsado walaalkiis ka yar.
Isla sidaas ayuu ku raacay, wuxuu ka gudbay isla hillocks iyo kaymaha ilaa uu ka gaadho isla badda cas ee mugdiga ah. Daal, wuxuu ag fadhiistay dhagaxii cad, ooyay oo ooyay ilaa uu dhintay oo loo beddelay geed leh jirridda toosan iyo calaacasha cagaaran ee dusha saaran. Waxay ahayd geedka areca.
Aroosadda yari da 'yarta aad bay u weyday TAN si ay iyadu hal maalin u kacdo markay raadiso isaga.
Iyaduna isla sidaas oo kale ayay tagtay oo tagtay geed dheer, oo dhammuna way daashay, oo cagteeda bay jiiftay. Oohin intay quusatay ayay dhaaratay, ooysay iyadoo barooranaysa ilaa ay dhimato. Waxaa loo beddelay geed firidhsan - geedka canabka ah - kaas oo ku wareejiyay wareega sare ee geedka aagga.
Waxaa ku iftiimiyay riyo, dadka meesha deggan waxay dhiseen macbud ay ku xusayaan jaceylka qalloocan iyo isku xirnaanta ee dadka aan faraxsaneyn.
Sannado kadib, markii King Hung Vuong III wuxuu ka dhacay meeshaas, wuu ka yaabay dhagaxii, geedka iyo geedka uu weligiis hore arkin.
Markuu maqlay sheekada oo dhan, wuxuu yiri: «Hadday kuwanu walaaliyo yihiin oo caqiido ah, iyo nin aamin ah oo xaas leh, aan saddexda waxyaalood iskula wadaagno si aan natiijada u aragno.»
Waxay gubeen dhagaxa oo jilicsan oo caddaan ah, wax yar bay ku duudduubnaa caleen of betel, waxay ka gooyeen gabal yar oo loo yaqaan 'isca nut', wayna isu ururiyeen. Nooc dareere cas ah oo u eg dhiig ayaa ka dhammaaday isku darka.
Boqorka ayaa ka fiirsaday oo yiri: «Tani waa astaanta saxda ah ee conjugal iyo jaceylka kalgacalka leh. U ogoloow geedka iyo geedka meelkastoo ay ku koraan xuska sheekadan quruxda badan laakiin murugada leh. »
Dadkuna waxay bilaabeen inay helaan walaalo, iyo gaar ahaan dadka dhowaan guursaday si ay u u calalaan si ay u ilaashadaan jacaylka kalgacalka iyo jacaylka ah. Dabadeed, caado dhaqso ayaa ku faafay ilaa ugu dambayntii dad aad u badan ayaa khiyaameeyay khiyaanooyinka shirarka oo dhan si loo ilaaliyo is-jacaylka. »
Maalmahan, betel waxaa wali khiyaameeya lammaanayaasha cusub, iyo sidoo kale xafladaha iyo xafladaha. Dadka qaar weli waxay jecel yihiin inay calalaan iskudhafkan adag ee xoogaa yar ka dhigaya, taas oo umuuqata kuwa u qadhaadh, laakiin runti way u fiican tahay kuwa loo isticmaalay.
◊ CINDERELLA - Sheekada TAM iyo CAM - Qaybta 1.
◊ CINDERELLA - Sheekada TAM iyo CAM - Qaybta 2aad.
◊ Quruxda RAVEN.
◊ Sheekada TU THUC - Dhulkii BLISS - Qeybta 1.
◊ Sheekada TU THUC - Dhulkii BLISS - Qeybta 2.
Nooca Fiyatnaamiis (Vi-VersiGoo) websaydhka-websaydhka: BICH-CAU Hoi ngo - Phan 1.
Nooca Fiyatnaamiis (Vi-VersiGoo) websaydhka-websaydhka: BICH-CAU Hoi ngo - Phan 2.
Nooca Fiyatnaamiis (Vi-VersiGoo) websaydhka-websaydhka: Viên ĐÁ QUÝ của QUẠ.
Nooca Fiyatnaamiis (Vi-VersiGoo) websaydhka-websaydhka: Câu chuyện TẤM CAM - Phân 1.
Nooca Fiyatnaamiis (Vi-VersiGoo) websaydhka-websaydhka: Câu chuyện TẤM CAM - Phân 2.
3 :… Cusbooneysiinaya…
(Booqday jeer 1,299, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,939
← Beesha HOA oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Faransiiska ORIENTALIST - Qaybta 1 →